> Resource > DVD > Sida loo View PowerPoint Muqaal on DVD Player
"Waxaan ahay macalin ka timi Dugsiga Dhexe ah. Isbuucaan waxaan la siiyey hawsha diinta slideshow PowerPoint ah oo wuxuu galay qaab playable on news channel ee dugsiga, taas oo kaliya isticmaala DVDs inkastoo ciyaaryahanka DVD ah. Sidee baan u samayn karaa in?"
"On Thanksgiving Day, aan, qoys weyn qaban midoobo halkaas waxaa jiri doonaa badan oo sawiro laga qaaday. Waxaan sameeyay slideshow PowerPoint la sawiro, kuwaas oo ah. Hadda waxaan jeclaan doonaa si ay u soo diri xigaalkaygii u arkaysid. Laakiin qaar ka mid ah ah iyaga oo aan haysan kombiyuutar. Sidaa awgeed, waxaan ka fiirsaneysa haddii aan si awood ahay gubi slideshow PowerPoint eee DVD ah si ay u yeelan doontaa in ay u ciyaaro iyada oo ciyaaryahan DVD ? "
Weligaa ma kala kulantay dhibaatooyin la mid ah aad soo bandhigidda PPT? Haddii ay haa tahay, halkaan xal - by badbaadinayo aad slideshow PowerPoint gal DVD ah. Laakiin, soo, waxa uu ma ay noqon doontaa in si toos ah si aannu u dhan samayn karo software PowerPoint ah. Sidaas, sideena u qaban karo, run ahaantii?
Dhab ahaantii, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay PowerPoint DVD Converter oo kaa caawin kara inaad si loogu badalo aad slideshow PowerPoint gal DVD ah si toos ah. Dabcan, waxaa kale oo jira siyaabo kale oo loo sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa laga yaabaa fudud ama mid ka mid ah midka ugu haboon. PPT2DVD Wondershare wuxuu kuu noqon doonaa qalab ku haboon. Raac tallaabooyinka hoose oo waxaad awoodi doontaa in aad u aragto in aad PowerPoint ciyaaryahanka DVD ah si fudud. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda hadda oo daya sida ku haboon doonaa in baahida PPT aad.
Download iyo rakibi PowerPoint si DVD Converter. Gali DVD faaruq galay your computer. Riix dar dajiyaan slideshow PowerPoint in aad rabto in aad aragto ciyaaryahan DVD ah. Waxaad u bedeli karaan ilaa 12 bandhigga files hal mar oo kale oo aad qabsato karaa isku xigxiga ee files ah.
Habee ee heerka TV iyo ratio Aragti haddii loo baahdo. Haddii aad rabto in aad gacanta falgali duubey PowerPoint inta ciyaareed, aad si fudud u riixi kartaa sahlo hab buuggan .
Dooro iyo abuuro menu DVD jilicsan si aad u slideshow PowerPoint. Waxaa la yaab leh 47 dhisay-in doorashooyin la marto DVD menu si taxadar leh loogu tala galay, taas oo aan ku guuldareysan doonaan inay kuu soo bandhigi heer sare ah Customization marka ay timaado in baahiyaha kala duwan. Foomamka menu dhami waxay u sii kala saaraa ka yar afar kooxood oo waaweyn; ganacsiga, dabaal, waxbarashada iyo dabeecadda.
4 Beddelaan PPT si DVD
Hadda waxaad u timid inaad tallaabadii u dambaysay ee diinta PowerPoint ay u DVD . Ma aha in aad ka walwasho haddii ay jiraan wax DVD gubi on your computer, demi kaddibna DVD dhisay-in barnaamijka waxay kaa caawin kartaa in aad ku dhameysan hawlaha qaab beddelidda si toos ah.
Hadda waxaa sidoo kale lagu sameeyey iyo Bosnia! Waxaad kartaa aragto aad slideshow PowerPoint on DVD ciyaaryahan la disc DVD isla markiiba. Waa diyaar u qaybsiga ama arkaysid labada slideshow PowerPoint qoyska ka mid ah, slideshow ama ganacsi slideshow waxbarasho; PPT2DVD kaa caawin kartaa inaad si ay u wadaagaan si xor ah. Ma danaynaysaa oo faraxsanahay waqti isku mid ah? Bilow arkaysid kuu gaar ah slideshow PowerPoint ciyaaryahanka DVD aad u!